Andre Villas-Boas Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Home NDỊ AKWỤKWỌ Andre Villas-Boas Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Manager kasị mara aha na aha njirimara; "AVB". Ụmụ anyị Andre Villas-Boas Akụkọ na Akwụkwọ akụkọ na-enweghị isi Ihe eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ndị na-amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ndị na-achịkwa ya mana ole na ole na-atụle Andre Villas-Boas Bio nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Andre Villas-Boas Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ihe mere eme -Ndụ mbido
Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas a mụrụ na 17th ụbọchị nke ọnwa 1977 in Porto, Portugal. Villas-Boas bụ nwa nke abụọ na nwa mbụ nne ya Teresa Maria na nna, Luís Filipe Manuel.
Villas-Boas ekwuwo okwu nke ọma n'asụsụ Bekee kemgbe ọ bụ nwata n'ihi ekele nne nne ya nke si na Stockport, England. Mgbe ọ dị afọ 16, Villas-Boas hụrụ onwe ya na ya bi n'otu ụlọ dịka Sir Bobby Robson, bụ onye na-ahụ maka Porto n'oge ahụ. Ha ghọrọ ndị agbata obi enyi mgbe ha na-agbarịta ụka n'etiti ndị nke abụọ. Nke a bụ oge Villas-Boas hụrụ onye nkụzi ya.
Robson nwere ọmịiko ya nke ukwuu nke mere na o kwenyesiri ike na ya ga-enye ya ọrụ na ngalaba nlekọta nke Porto. Mgbe ọganihu ya, o mesịrị gbaa ya ume ka o nweta ikike ọrụ nkuzi FA. Villas-Boas bụ ọdụdụ na ọgụgụ isi na ụlọ akwụkwọ nkụzi ya. O nwetara ikikere C ya n'oge 17, na ikikere B ya na 18. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ nwetara akwụkwọ ikike ya n'oge 19 ma mesịa nweta UEFA Pro License n'okpuru nsụgharị nke Jim Fleeting. Ndị a ruru eru nwetara na-egosi na Villas-Boas dị njikere ịkụzi otu egwuregwu ọ bụ ezie na ọ bụ nwata.
Villas-Boas nwere mkpụmkpụ dị ka onye nchịkwa ihe nchịkwa nke mba Britain Virgin Islands n'oge ọ dị afọ 21, tupu ya agaa ọrụ dị ka onye inyeaka na Porto n'okpuru José Mourinho. dị ka Mourinho kpaliri ndị isi na Chelsea na Internazionale, Villas-Boas soro.
Andre Villas-Boas Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ihe mere eme -Ndụ mmekọrịta
E nwere naanị otu nwanyị na ndụ ya. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Joana Maria.
Na 2004, Villas-Boas lụrụ Joana Maria Noronha de Ornelas Teixeira, onye ya nwere ụmụ nwanyị abụọ, Benedita (a mụrụ August 2009), Carolina (a mụrụ October 2010) na nwa nwoke, Frederico (a mụrụ May 2015). N'okpuru ebe a bụ Villas-Boas na ụmụ ya abụọ mara mma.
N'okpuru bụ Andre Villas-Boas na nwa ya, Frederico Villas-Boas.
N'okpuru ebe a bụ Joana Maria na ụmụ ya abụọ mara mma.
Andre Villas-Boas Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ihe mere eme -Ndụ nke Onye
Andre Villas-Boas nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Andre Villas-Boas ike: Villas-Boas bụ ndị na-akwado, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị amara, ndị ezi uche na ndị na-elekọta mmadụ.
Andre Villas-Boas adịghị ike: Ọ nwere ike inwe obi abụọ. Ọ hụrụ n'anya na-ebu iwe.
Gịnị Andre Villas-Boas amasị: Ọ nwere ọdịdị maka Harmony, ịdị nwayọọ na ịkọrọ ndị ọzọ ihe.
Ihe Andre Villas-Boas anaghị achọ: Ọ na-adịghị achọ ime ihe ike, owu ọmụma, ikpe na-ezighị ezi, ụda olu na nkwekọrịta.
Na nchịkọta, Andre Villas-Boas nwere àgwà dị jụụ ma dị mma. Ọbụna gị onwe ya nwere ike ịnọgide na-ewe iwe dị ka a hụrụ na mmekọrịta ya na ndị egwuregwu, ọ bụ onye ga-emesịa kwuo na ọ bụ nwute. Andre Villas-Boas dị njikere ime ihe ọ bụla iji zere esemokwu ma na-edebe udo mgbe o kwere mee.
Andre Villas-Boas Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ihe mere eme -Ndụ Ezinụlọ
Andre-Villas Boas si n'ebube bara ọgaranya na eze tupu a kwụọ ụgwọ ịgba akwụna maka ya. Ọ bụ nwa nke abụọ na nwa mbụ Luís Filipe Manuel Henrique mere Vale Peixoto de Sousa e Villas-Boas (a mụrụ 29 February 1952) na Teresa Maria de Pina Cabral e Silva (nke a mụrụ 11 February 1951).
Ọ na-asụ Bekee nke ọma, ebe nne nne ya bụ Margaret Kendall kụziiri ya, onye nne ya kwagara na Portugal site na Cheadle, Greater Manchester, England, ịmalite ọrụ ahịa mmanya. Nwanne ya bụ Douglas Kendall jere ozi dị ka onye ọchịagha maka RAF n'oge Agha Ụwa nke Abụọ.
Villas-Boas bụkwa nwa nwa Dom José Gerardo Coelho Vieira Pinto do Vale Peixoto de Vilas-Boas, 1st Viscount nke Guilhomil. Karia nke a, nna nna nna ya bu José Rui Villas-Boas bu Viscount nke Guilhomil, nke e nyere nna ya José Gerado Villas-Boas site n'aka eze Carlos I na 1890.
N'ikpeazụ, nwanne Villas-Boas bụ João Luís de Pina Cabral Villas-Boas bụ ihe nkiri Portuguese na onye nkiri telivishọn. N'okpuru ebe a ka anya ya dị.
João Luís nwere akụkụ dị nta na mmemme ejiji Mistérios de Lisboa (Ihe omimi nke Lisbon).
Andre Villas-Boas Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ihe mere eme -Ihe ndị Chelsea na-akwado aha ya
Ndị na-akpọ FC FC mgbe a na-akpọ Andre Villas-Boas DVD n'ihi na oge ọ bụla ha hụrụ ya, ọ na-agagharị na DVD na-agbanye ya ma na-ele ha anya.
Lelee DVD vidio ahụ enyereghị ndị egwuregwu ahụ aka. ọ mere ka ọnụego 45% nweta mmeri. Nke a mere ka enweghi mmasị maka AVB.
Dị ka onye na-akwado Chelsea na-etinye ya, ...
"Ndị egwuregwu (Lampard na Terry karịsịa) ekweghị na ya na ụzọ DVD ya. Ha azụtaghị n'ime ikiri DVD ka ha mụọ football.
N'ihi ya, a na-akpọ Andre Villas-Boas aha AVB ruo DVD mgbe ọ kwụsịrị inwe okwukwe na ndị na-egwu Chelsea.
Andre Villas-Boas Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ihe mere eme -Njikọ Njikọ Premiya na N'ọfe
Oge Villas-Boas na Chelsea malitere ịkụda mgbe ọtụtụ ndị omempụ gosipụtara nkwenye ha na usoro ịkụziri ya. Ọ kwụsịrị ọrụ ya dị ka onye na-elekọta Chelsea n'oge na-adịghị anya. Ndi Portuguese esiwo na Tottenham bia ebe o na adighi nma. Ọ kwagara Russia ka ọ bụrụ onye nlekọta Zenit St. Petersburg ebe ọ ghọrọ eze ọ maara onwe ya.
Andre Villas-Boas Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ihe mere eme -Ihe Eze ahụ kwuru
Na Zenit St. Petersburg, ọ meriri trompies atọ gụnyere njikọ. Okposụkedi enye ama enen̄ede ọdiọn̄ọ ke ini enye okodude ke London, Villas-Boas ama akabade edi edidem ọnọ ikọt esie ke Russia nte ẹwụtde ke idak.
A na-ele Villas-Boas anya maka nlebara anya nke ndị iro ya. Egwuregwu football ya dabeere na nchebe siri ike.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Andre Villas-Boas na akụkọ akụkọ nke eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Ụmụaka ụmụaka ụmụaka bụ Nelson Story Plus na-abụghị eziokwu
Ụmụaka Rui Patricio Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Kachasị mma ụmụaka
ỌT STT ST AKW FORKWỌ EGO
C Ronaldo Child Story Plus Na-agbagha Eziokwu Akụkọ